Uzimesele ukuphakami­sa igama lakhe nelenkampa­ni uHamilton - PressReader
Uzimesele ukuphakami­sa igama lakhe nelenkampa­ni uHamilton
Kuyajabuli­sa ukuthi noma kukhona abamunyund­elayo uHamilton kodwa usakhombis­a intshiseke­lo yokwenza kahle
Uma ukhuluma ngomdlalo wezimoto zomjaho obizwa ngeFormula One (F1), igama elifika kuqala elikaMicha­el Schumacher.
USchumache­r ongowokuda­buka eGermany wazakhela udumo egila izimanga kulo mdlalo enqoba imiqhudelw­ano ephula namarekhod­i ayebekiwe ngaleso sikhathi. Lo mshayeli oneminyaka yobudala engama-51 waqala ukushayela izimoto ngowe-1991 kwaze kwaba unyaka wezi-2006, wakhuza ibuya emveni kokuba wayesethat­he umhlalapha­nsi ngonyaka wezi-2010 kwaze kwaba unyaka wezi-2012.
Eminyakeni eshayela ngaphansi kweF1 waba ngumpetha womhlaba kayisi-7, ngonyaka we-1994, we-1995, owezi-2000, owezi-2001, owezi-2002, owezi-2003 nangowezi-2004. Washiya ebeke irekhodi lokunqoba imiqhudelw­ano engama-91. Washayela ngaphansi kwezimoto iJordan, iBenetton, iFerrari neMercedes.
Omunye umlando kaSchumach­er uyaziwa kakhulu ingakho nje igama lakhe liyohlezi lihamba phambili kulo mdlalo, nayeshayel­a kanye nabo behlezi bemukelisa njengohamb­a phambili.
Kodwa iqiniso lithi umshayeli waseBritia­n uLewis Hamilton sekuyisikh­athi sokuthi kube igama lakhe manje elihamba phambili kulo mdlalo.
Okwenza lokho uHamilton ingoba lo mshayeli oshayela ngaphansi kwaMercede­s cishe wonke amarekhodi abekwa uSchumache­r usewaphuli­le.
Uma kungabhekw­a kunobhutsh­uzwayo kunabadlal­i abagila izimanga eminyakeni edlule lapho ungabala u-Edson Arantes do Nascimento odume ngelika “Pele” ongowaseBr­azil noDiego Armando Maradona waseArgent­ina.
Yize bawenza umlando babeka amarekhodi kodwa amagama abo akusakhulu­nywa ngawo kakhulu, kwazise kunabadlal­i ababili abafike bazibekela amarekhodi abo okunguLion­el Andres Messi odabuka e-Argentina odlalela IFC Barcelona yaseSpain noCristian­o Ronaldo do Santos wasePortug­al odlalela iJuventus yase-Italy.
Kubuhlungu-ke okukaHamil­ton ofuze ingabe ujabulela ukusebenza kahle kwakhe kodwa kukhona abangafuni ukumncome, kunalokho bamuqhatha­nisa noSchumach­er.
Emasontwen­i adlule kuke kwaba khona izinkulumo ezithi uHamilton unqoba ngoba akanakho ukuncintis­ana okuningi, futhi isikhathi akuso kumele anqobe ngoba zonke izinto azisebenzi­sayo ziseqophel­weni eliphezulu uma uziqhathan­isa nezazisets­henziswa eminyakeni eyedlule.
Umbuzo uthi uma kunjalo pho kungani-ke kuhlezi kunqoba yena kuphela? Ukube kunjalo ngabe ukhona kubashayel­i ashayela nabo manje osebe ngumpetha womhlaba noma kane.
UJack Sterwatt ungomunye wabakhombi­sa ukungamhal­aliseli uHamilton ngokuphume­lela kwakhe.
USterwatt owaba ngumpetha womhlaba kathathu esikhundle­ni sokuncoma lesi sikhondlan­dla esinguHami­lton wathi: “UHamilton noma kuthiwa uyawaphula amarekhodi kaSchumach­er kodwa akayena umshayeli omkhulu. Angimubali ngisho kwabathath­u kulaba engithi bahamba phambili.”
Kulaba abathathu athi bangabaham­ba phambili uSterwart ubala uJuam Manuel Fangio, uJim Clark naye uSchumache­r.
UHamilton ngeSonto eledlule unqobe iPortugese Grand Prix, lokho kwamenza waphula irekhodi leminyaka eli-14 likaSchuma­cher lokunqoba imiqhudelw­ano engama-91, manje usenqobe imiqhudelw­ano engama-92.
Usethubeni elikhulu ukuthi lo mshayeli usengaqhub­eka ukunqoba kwakhe imiqhudelw­ano kuyo le sizini yeF1ezoson­gwa ngoZibandl­ela.
Kusele imiqhudelw­ano emine lapho kubalwa i-Emlia Romagna Grand Prix ezokuba ngeSonto, iTurkish Grand Prix, iSakhir Grand Prix ne-Abu Dhabi Grand Prix ezoba mhla zili-13 kuZibandle­la.
Irekhodi elisele elisahlezi manje elabekwa uSchumache­r elokuba ngumpetha kayisi-7, uHamilton yena usebe ngumpetha kayisi-6. Waba ngumpetha ngonyaka wezi-2008, owezi-2014, owezi-2015, owezi-2017, owezi-2018 nangonyaka wezi-2019.
Kubukeka nalo ezolifica uHamilton njengoba kunguyena ozihola phambili ngamaphuzu ama-256 elandelwa uzakwabo ashayela naye ngaphansi kwakwaMerc­edes uValterri Bottas odabuka eFinland onamphuzu ali-179. Uma enganqoba umqhudelwa­no owodwa nje kobe sekucacisa ukuthi uyalifica leli rekhodi, angajatshu­lelwa kulona izinkakha zalo mdlalo.
Kukhona konke okujabulis­ayo ukuthi uHamilton uthi yize bengamboni njengomsha­yeli ohamba phambili kodwa yena uthi usazoqhube­ka nokunqoba imiqhudelw­ano, nokuthi abe ngumpetha womhlaba uma nje isikhathi sisavuma.
Isithombe: Reuters ULewis Hamilton